भक्तपुरकी ‘समाजसेवी केटी’
रेणु त्वानाबासु भक्तपुर - सोमबार, भदौ २२, २०७७
उफ् कोरोनाको त्रास!
जुन त्रासमा भक्तपुरकी २३ वर्षीया पुनम कर्माचार्य पनि थिइन्।
पुनमका दौंतरीहरूको दैनिकी मोबाइलका किबोर्डमा औंला थिच्दै बितिरहेको हुन्छ। बचेको समय सिनेमा हेर्ने, संगीत सुन्ने वा यस्तै मनोरन्जनमा खर्चिरहेका हुन्छन्।
तर, पुनम त्यो भीडभन्दा अलग्गै छिन्। र, त भक्तपुरको घलाटे क्षेत्रमा उनका दौंतरीमात्र नभई सबैले खुलेर तारिफ गरिरहेका हुन्छन्।
सबैले भन्छन्– ‘समाजसेवी केटी’।
यो नाम विस्तारै उनको परिचयकै रूपमा स्थापित भइरहेको छ।
उनले गरिरहेको समाजसेवा हो– जोखिम मोलेर कोरोनासम्बन्धी जनचेतना फैलाउनु।
समाजसेवामा होमिएको पनि धेरै भएको छैन।
ख्वपः पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट च्याम्हासिंहबाट प्रविणता प्रमाणपत्र तहमा नर्सिङ गरेकी उनले केही समय भक्तपुर अस्पतालकै सामाजिक सुरक्षा इकाईमा काम गरिन्।
करार अवधि सकिएपछि उनी फुर्सदिली भइन्। उनलाई फुर्सदिलो जीवन बिताउन मन थिएन।
के गर्ने, गर्ने? उनी सोचिरहेकी थिइन्।
विश्व कोरोना महामारीले आक्रान्त बन्दै थियो। त्यही बेला उनी ‘आरएनए–१६’ मा जोडिइन्। र, त्यहीँबाट सुरु भयो उनको समाज सेवा यात्रा।
२०७५ चैतमा उनी ‘रेस्क्यु एन्ड अवेरनेस’ (आरएनए–१६) समूहमा जोडिइन्। यो स्थानीय युवाहरूको समूह हो।
जुन मानवीय विपत्ति सेवामा खट्ने गर्छ। बाल्यकालमा उनी निकै जिद्धी थिइन्। मनमा लागेको गरिहाल्ने पुनमको सानैदेखिको बानी हो। सामाजिक कार्य भनेपछि उनी हुरुक्कै हुन्थिन्। जुन स्वभावलाई यो समूहले ऊर्जा प्रदान गर्‍याे।
स्टाफ नर्सको परिचय फेरिएर यतिबेला उनको परिचय आरएनए–१६ समूहको कम्युनिकेसन अफिसर बन्न पुगेको छ।
‘समाजको केटी मान्छेलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ। त्यसैले पनि मैले अरूको सोच बदल्न आफूले केही गर्नुपर्छ भन्ने ठानेँ, र समाजसेवामा होमिएकी छु,’ पुनमले आयोमेलसँग भनिन्।
अहिले उनको ग्रुपमा चारजना सदस्य छन्। जसमा उनी एक्ली केटी हुन्।
चीनमा कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिरहेको सयमदेखि नै नेपालमा आयो भने कसरी जोगिने भन्ने बारेमा आरएनए ग्रुपले अग्रिम तयारी थालेको थियो।
उनीहरू स्कूल/स्कुलमा पुगेर जनचेतना जगाइरहेका हुन्थे।
विशेषगरी सरकारले चीनको वुहानबाट नेपालीलाई उद्धार गरेर ल्याइसकेपछि अझ सचेत भएर आफूहरूले काम थालेको उनी बताउँछिन्।
चैत ११ गते सरकारले ‘लकडाउन’ घोषणा गर्‍यो। उनीहरू १० गते नै भक्तपुर अस्पताल अगाडि टेन्ट गाडेर बस्न थालिसकेका थिए।
त्यसपछिको उनीहरूको दैनिकी झनै व्यस्त बन्यो।
‘त्यहाँ बसेर हामीले चौबिसै घन्टा कोरोनासम्बन्धी बिरामीलाई सेवा दिन थाल्यौं। अन्य बिरामीलाई पनि सचेत गराउन थाल्यौं। जनचेतना जगाइरह्यौं,’ उनले भनिन्।
उनीसहित समूहका अन्य सदस्यहरू राजेश गाइजु, अरुण सैंजु र न्हुज किजुले चौबिसै घन्टा भक्तपुर अस्पताल परिसरमै बसेर सेवा दिन थाले। उनीहरू खानेबस्ने नै त्यहीँ गर्न थाले।
चैत १० गते घरबाट निस्केकी पुनमलाई दुई महिनासम्म घर जाने फुर्सद नै भएन। रातदिन सेवामा खटिरहिन्।
एउटी केटी मान्छेका लागि पक्कै सहज थिएन्।
तर, समाजसेवाको भोकका अगाडि सबै समस्या मिथ्या र फिक्का बनिदिए।
‘केटी भएर होला मलाई एकदम व्यक्तिगत समस्या भए। अस्पताल बाहिरतर्फको शौचालयमा नुहाउनुपर्थ्याे। जुन एकदमै अप्ठोरो थियो,’ उनी सम्झिन्छिन्, ‘महिनावारी भएको समयमा प्याड फेर्न र सरसफाइमा निकै गाह्रो हुन्थ्यो।’
लकडाउन हुनुभन्दा दुई साता अगाडि मात्रै स्कुटर दुर्घटना परेर उनको घुँडामा चोट लागेको थियो।
‘डाक्टरले रेस्ट गर भनेका थिए। तर, मेरो मनले मानेन,’ उनले भनिन्, ‘विश्व कोरोना आक्रान्तमा हुँदा मैले मेरो मनलाई कसरी रोक्न सक्ने र?’
उनले केही वर्षअघि स्काउटको तालिमसमेत लिएकी थिइन्।
संक्रमितसँगको संगत वा उनीहरूलाई परामर्श दिने काम गर्दा जोखिम त थियो। तर, उनले हिम्मत हारिनन्। संक्रमण दर बढ्दै गएपछि बरु पिपिई लगाएर सेवा दिन थालिन्।
‘चौबिसै घन्टा पिपिई लगाइरहनु कठिन काम हो।
पिपिई लगाएर काम गर्दा दन्किरहेको आगो नजिक बसेजस्तै हुन्थ्यो, पसिनाले शरीर निथ्रुक्क भिज्थ्यो,’ उनी भन्छिन्।
गर्मी र पसिनाको प्रभावले उनको अनुहारभरि फोका आए। पटकपटकको सेनिटाइजर प्रयोगले हात पुरै सुख्खा हुनथाल्यो। पिपिई सेट फुकालेपछि निरन्तरको थकाइले उनको शरीर गलेको हुन्थ्यो। त्यसमाथि स्कुटर दुर्घटनामा परेर चोट लागेको खुट्टा।
‘एउटा केटी मान्छेले समाजसेवाको यात्रामा लागिरहँदा समाजले औंला उठाउँछ,’ उनले मन दुखाउँदै भनिन्, ‘रातदिन घर बाहिर हिँड्छे। यसको बिहे गरिदिनुपर्छ भन्छन्। मानवीय सहायताको काम गर्न पनि लिंग चाहिने हो र?’
सामाजिक कामले घर फर्किन ढिलो हुँदा कोही सहकर्मी मलाई घरमा पुर्‍याउन जाँदा आफूलाई समाजले नराम्रो नजरले हेर्ने गरेको उनले दुःखेसो पोखिन्।
‘मलाई थाहा छ, म के गरिरहेकी छु? मैले राम्रो काम गरिरहँदा समाजले गर्ने शंकाप्रति वास्ता गर्न छोडिसकेँ’, उनले भनिन्।
उनी आफूलाई सानैदेखि हक्की स्वभावको भएको बताउँछिन्।
‘कक्षा ४ मा पढ्दा मलाई शिक्षकले उभिएर पढ्न लगाउनुभयो। म त्यो समयमा कमजोर विद्यार्थीमा पर्थें,’ पुनमले भनिन्, ‘त्यो समयमा मेरो शब्दको उच्चारण नमिलेकाले मजाक उडाइएको थियो। त्यही उडाइएको मजाकले मलाई हक्की बन्न प्ररेरित गरेको हो।’
त्यो घटनापछि उनी कक्षामा सधैं प्रथम भइन्। केटाहरूले केटीहरूलाई सधै किन कमजोर र हेयका दृष्टिले हेर्छन्? उनको मनमा सधै उब्जीने प्रश्न हो यो।
त्यही हुटहुटीले उनलाई सधैं केटासरह छाती खोलेर काम गर्न प्रेरित गरिरह्यो। र, आफ्नो आत्मबल बढाउन उनले किक बक्सिङ खेलसमेत सिकिन्। जसलाई उनले अहिले पनि निरन्तरता दिँदै आएकी छिन्।
उनी कुनै पदक जित्नका लागि नभई आफ्नो सुरक्षाका लागि सिकेको ठान्छिन्। सुरुमा, ‘केटी भएर किन बक्सिङ सिक्न जानपर्‍यो?’ उनकै परिवारका सदस्यले भनेका थिए।
तर, पुनमको इच्छाशक्तिलाई केहीले रोक्न सकेन।
सामाजिक सञ्जालमार्फत समूहका नेतृत्वकर्ता अरुण सैंजुसँग उनको सम्पर्क भयो। करिब तीन वर्ष पहिले उनले सैंजुलाई सामाजिक सञ्जालमा पछ्याउँदै आएकी थिइन्।
एक दिन सैंजुले नै पुनमलाई ग्रुपमा जोडिन आग्रह गरे। उनी खुशी भइन्। आफूले खोजिरहेको कुरा प्राप्त भए झैं लाग्यो।
उनलाई १० देखि ५ बजेसम्मको डिउटी गरेर जीवन चलाउनु त थिएन।
खुला आकासमा पागुर काढेका चराजस्तै बेफिक्री उडेर समाज सेवामा निरन्तर खटिन मनपर्छ उनलाई।
उनको समूहले चीनमा कोरोना फैलिएको समाचार आइसकेपछि इन्टरनेट रिसर्चका कुरा हेर्न थालेको थियो। त्यसपछि समाचार, इन्टरनेटमा रिर्सच गरेको आधारमा स्कुलहरूमा कोरोना नेपाल भित्रिएपछि कसरी जोगिने भनेर उदाहरणसहित विद्यार्थीलाई जानकारी दिन थाले।
उनले चार साथीको कार्यविभाजनअनुसार संयुक्त रूपमा काम गरिरहेको बताइन्। यसअनुसार अरुण र राजेश फिल्डमा खटिने तथा न्हुज बिरामीको स्वाब लिएर परीक्षणका लागि काठमाडौंको टेकुमा दौडने गरेको उनले सुनाइन्।
उद्धारकर्मी अरुण र उनको टिमले भक्तपुर अस्पताल, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेनासँगको सहकार्यमा कोरोना संक्रमितहरूको उद्धारमा खटिरहेको पुनम बताउँछिन्।
यसका लागि सम्भावितहरूको घरघर पुगेर उद्धार गर्नेदेखि उनीहरूलाई अस्पताल पुर्‍याउने, उनीहरूको ट्राभल हिस्ट्री लिने, परीक्षणका लागि स्वाब काठमाडौं टेकुमा लगिदिने लगायत काम आफूहरूले गर्न थालेको उनले बताइन्।
पुनम चाहिँ भक्तपुर अस्पताल परिसरमै बसेर टोलीको कम्युनिकेसन संयोजनको काममा खटिन्थिन्। आफूले बाहिर फिल्डमा खटिने र अस्पतालभित्रको अवस्थाबारे जानकारी दिने गरेको बताइन्। सहयोगमा खटिन उनीहरूले सरकारबाट पिपिई सेट पाएका छन्। त्यही कवचको प्रयोग गरी उनीहरू सेवा खटिन्छन्।
भक्तपुर अस्पताल परिसरमा उनीहरूले तीनवटा अस्थायी टेन्ट बनाएका छन्। एउटा आफूहरू बस्न, अर्काे स्वदेशमै रहेका सम्भावित संक्रमितलाई उपचारका लागि राख्न र अर्को विदेशबाट फर्केका सम्भावित संक्रमित राख्न।
उनीहरूले स्वाब परीक्षण गर्नुपर्ने बिरामी र कोरोना संक्रमित बिरामीको हेरचाह गर्ने काममा लागेका थिए। यहि आरएनए–१६ समूहले नै धुलिखेलमा पहिलोपटक कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएकी महिलाको शव व्यवस्थापन गर्ने काम गरेको थियो।
यो समूह पहिलादेखि नै स्वस्फुर्त उद्धारमा खटिँदै आएको छ। २०७२ सालको महाभूकम्पमा पनि उद्धारमा खटिएर यो समूह चर्चित बनेको थियो। यसबाहेक अन्य सवै उद्धारमा उनीहरूको यो समूह सक्रिय छ।